वाणिज्य बैंकहरुको मूल्य नबढी सेयर बजारको वृद्धिमा ब्रेक लाग्न संभव छ ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > वाणिज्य बैंकहरुको मूल्य नबढी सेयर बजारको वृद्धिमा ब्रेक लाग्न संभव छ ?
क्लिकमान्डु २०७८ असार ६ गते १०:२२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बैंकहरुको बाहुल्यमा चलेको नेपालको सेयर बजारमा उनीहरुको मूल्य नबढी कसरी ब्रेक लाग्ला ? अन्य संस्थाहरुका सेयरको मूल्यवृद्धिको सहयोगमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बरले बढेको सेयरको कारोबार मापक परिसूचक नेप्से यही लयमा बढ्दै ४००० अंकतिरको यात्रातर्फ जान्छ कि ३००० माथि पुगेको नेप्सेको उकालो यात्रामा ब्रेक लाग्छ ? बजारमा अझै कमाउने अवसर मिल्ला कि बाहिरिने बेला भयो ? लगानीकर्ताहरुको मनमा थुप्रै प्रश्न, जिज्ञासा र अन्तरद्वन्द्वहरु छन् । जसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
नियामक निकायले के सन्देश दिए ?
न्यून चुक्ता पुँजीका कम्पनीको सेयरलाई कर्नरिङ गरी अस्वाभाविकरुपमा मूल्य वृद्धि गरिएपछि धितोपत्र बोर्डले यसको छानविन गरी ५१ वटा कम्पनीमा त्यस्तो कारोबार गरिएको पत्ता लगायो । बोर्डले ती ५१ वटा कम्पनीमा बढी जोखिम छ भन्ने सन्देश दिएकोले लगानीकर्ताहरु अब सचेत हुन थालेका छन् । यसको अर्थ अब ती कम्पनीको सेयरमा न्यून लगानी हुनेछ, मूल्य धेरै घट्नेछ । र, तर्कसंकत घेरामा अडिनेछ । नघटे पनि कम्तीमा मूल्य वृद्धि चाहि हुनेछैन भन्ने अनुमान गरौं ।
अर्को नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै केही कम्पनीको सेयर कारोबारमा मापदण्ड तोकेपछि ती कम्पनीमा पनि जोखिम रहेको छ है भन्ने सन्देश उक्त नियामक निकायले दिएको छ । उसले भनेको छ, ‘कम्पनीको विगत तीन वर्षको वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीमा कर्जा लगानी नगर्नु ।’
धितोपत्र बोर्डले भन्योः यी ५१ कम्पनीको सेयर मूल्यमा चलखेल, लगानीकर्ता जोखिममा (सूचिसहित)
त्यसैगरी समस्याग्रस्त घोषणा भएका, निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम नभएका, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एकवर्ष व्यतित हुँदा पनि अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न नसकेका कम्पनीहरुमा पनि कर्जा लगानी नगर्नु ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत केही कम्पनीलाई लक्ष्यित गरी नीतिगत निर्णय गर्यो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफैं संलग्न नहुन तथा त्यस्त लक्षित कम्पनीमा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दियो । यस अनुरुप अन्य कर्जाजस्तै सेयर धितो कर्जामा पनि भुक्तानीको सुनिश्चितता हुनेगरी विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
साथै अहिले बैंकहरुले धितोको रुपमा रहेको कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आम्दानी, लाभांश इल्ड, लाभांश अनुपातजस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै तार्किक र चित्तबुझ्दो कारणबिना अचाक्ली मूल्य वृद्धि भएपछि राष्ट्र बैंकले सेयरको मूल्य क्र्यास भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिममा नपरुन भन्ने ध्येयले उसले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । यसले गर्दा पनि झण्डै ५० वटा सूचीकृत कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
विश्लेषण: किन लगातार बढिरहेको छ सेयर बजार ? र, अब कहिलेदेखि घट्छ ? यस्ता छन् कारण
राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड दुबैको कदमबाट झण्डै सय वटा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रभावित हुन सक्छ । बाँकी कम मूल्य भएका तर प्रतिफल दर उच्च भएका बैंकहरु र केही अन्य उपसमूहका संस्थाहरु मात्र लगानीका लागि न्यून जोखिमका क्षेत्र हुन् भन्ने दुबै नियामक निकायको निष्कर्ष देखिन्छ । के अव ती नियामक निकायले भनेजसरी नै यसहप्ताबाट बैंकहरुको सेयरमा लगानीकर्ताहरुको चहलपहल देखिएला ?
बजारको बढ्दो लय
यो बुलिस ट्रेण्ड हो । यसको यात्रा अझै बाँकी नै छ । पहिला कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढे अनुसार नेप्से नबढेको र अहिले यसैलाई पछ्याउँदै बढ्दै गएको देखिन्छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा नेप्से झण्डै दोब्बरले बढेको छ र पुरानो १८८१ को रेकर्ड तोडेर करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ ।
विश्लेषकहरु भन्छन्, नेपालको सेयर बजार बैंकहरुको बाहुल्यमा चलेको छ र तिनीहरुको सेयरमा बुल नआईकन घट्ने कुनै कारण नै छैन । चलचित्रको शुरु र मध्यतिर थुप्रै कलाकारहरुले अन्याय अत्याचार सहेपनि अन्त्यमा हिरोको एन्ट्री भएपछि दर्शक र सहभागीबाट गडगडाहट ताली आउँछ ।
चलचित्रको मजा र रमाइलो पाटोको आनन्द त्यसबेला उत्कर्षमा महसूस गर्न सकिन्छ । परिवेशले पनि यतातिरै डोर्याएको देखिन्छ । बैंकका सेयरको मूल्य वृद्धिसँगै बजार अझै उकालो यात्रातिरै जाने देखिन्छ । यसका केही मजबूत कारणहरु अरु पनि छन् ।
पुँजी वृद्धि र बोनस सेयरको संभावना
विशेषगरी बैंकहरुको संख्या बढी भएकोले मर्जर एक्विजिसन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । मर्जर एक्विजिसनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने चुक्ता पुँजी वृद्धिबाहेक अर्को बलियो हतियार राष्ट्र बैंकसामु देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको उपल्लो तहमा यसपटक आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यो हतियार चलाउने सम्बन्धमा फरक स्वरुपमा गृहकार्य शुरु भएको छ ।
बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी २० देखि २५ अर्ब पुर्याइने सूचना चुहिएका छन् । हकप्रद निश्कासन नदिने, बोनसबाट मात्रै पुँजी वृद्धि गर्न दिने र त्यसमा पनि निश्चित समयसीमा दिने हो भने बैंकहरुको सेयरमा अनौठो रौनक आउने निश्चित छ । कतिपय बैंकहरु जवर्जस्ती अर्को सक्षम बैंकसँग मिल्ने छन् र यसले पनि सिनर्जी प्रतिफल दिलाउने छ ।
न्यून चुक्ता पुँजीका केही बैंकहरुमा विस्तारै लगानीकर्ताहरुको चाप देखिएको कारण पनि यही हुनसक्छ । त्यसो नभएमा पनि गतबर्षकै मोडेलमा नाफाबाट बोनस सेयर दिनुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । बोनस सेयर वितरण सुनिश्चित भएपछि बैंकको सेयरको मूल्य बढ्ने प्रवल संभावना छ । यस्तो अवस्थामा विगतमा कुन बैंकले कस्तो मोडेलमा लाभांश वितरण गरेका थिए भन्ने खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरु स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट, एसबीआई र केही मारवाडी व्यापारिक समुदायको लगानी बाहुल्यका बैंकहरुले नगद लाभांशलाई जोड दिएको देखिन्छ भने प्रतिस्पर्धामा उत्रिन स्वदेशी बैंकहरुले स्टक लाभांशलाई जोड दिएको देखिन्छ ।
गत बर्ष नबिलले पैसा फिर्ता लैजान नपाउने भएपछि पूरै बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । यस्ता नेवार समुदायको लगानी बाहुल्य रहेको प्राइम बैंकले सँधै बोनस सेयरलाई जोड दिएको देखिन्छ ।
न्यून चुक्ता पँुजी भएका बैंकहरु सिद्धार्थ, सानिमा, प्रभु, लक्ष्मी, माछापुछ«े, सनराइज, सिभिल, सेञ्चुरी, एनआईसी, एभरेष्ट, एनसीसी, एनबीबीहरुको कारोबार विस्तारको प्रवृत्तिलाई हेर्दा बोनस सेयर वितरण गर्नैपर्ने हुन्छ । तिनीहरुले गत चैतमा गरेको नाफाको प्रवृत्तिलाई हेरेर असारको नाफा पूर्वानुमान गरी सेयरमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
बढ्दो अनलाइन कारोबार
यसपटकको सेयर बजारको बढ्दो यात्रामा अनलाइन कारोबारको ठूलो भूमिका रहेको छ । बिसं २०७६ को बुलमा डिम्याट खाता ३÷४ लाखको संख्यामा रहेकोमा अहिले करिव ३५ लाख यस्ता खाता रहेकोले सहभागिता पनि बढेको देखियो ।
गाउँ गाउँमा चेतना वृद्धि भै सहभागिता बढेको छ । सक्रिय लगानीकर्ताहरु दैनिक करिव २ लाख भएकोले कारोबार रकममा वृद्धि भएको छ । त्यस्तै टीएमएसका कारण कारोबारमा लगानीकर्ताहरुको स्वनिर्णयको पहुँच बढेको छ । पहिला ब्रोकरले खरिद गरिदिदा सहज पहुँच कठिन थियो ।
टीएमएसका कारण ब्रोकरले कन्भिन्स गर्न वा प्रभाव पार्न नभ्याउने र स्वचालित रुपमा कारोबार हुन थालेको अवस्था छ ।
न्यून ब्याजदरको सहयोग
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर अहिले निकै सस्तो भएको छ र ठूला लगानीकर्ताहरुले त करिव ७ प्रतिशतमा सेयर कर्जा पाइरहेका छन् । लगानीका अन्य क्षेत्रहरु नभएकोले तरलता प्रशस्त छ । असारमा विकास खर्चको भुक्तानी हुँदा यो अझ छेलोखेलो हुनेछ । बैंकहरुबीच बढेको प्रतिस्पर्धाका कारण कर्जा प्राप्ति सहज भएको छ र ब्याजदर सस्तो छ । मुद्दति खातामा पैसा राख्नुभन्दा कतिपय बैंकको सेयरमा लगाउँदा न्यून जोखिमका साथै बढी फाइदा प्राप्त हुने कुराको सुनिश्चितता देखिन्छ ।
त्यसैगरी गत बर्ष कर्जा पाउने मूल्यांकनको ७० प्रतिशत कायम गरिसकेपछि त्यही सेयर र बढेको मूल्यमा कर्जा पाउँदा लगानीकर्ताहरुको क्रयशक्ति बढेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्नसक्ने र पहिला त्यो उपयोग नभै अहिले हुन थालेकोले यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको देखिएको छ । अझै पनि थुपै्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने सीमा पर्याप्त छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के रहेको छ भने कम्युनिष्ट सरकार भएकोले प्रतिफल दिन लामो समय लाग्ने अन्य क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले तत्काल लगानी गरी तुरुन्तै नाफा बुक भैहाल्ने क्षेत्र भएकोले सेयरमा लगानी बढेको देखिएको छ । अझ लकडाउनका कारण अझ अन्यत्र लगानी हुने वातावरण नभएकोले तरलता थुप्रिने क्षेत्र सेयर बजार बन्न पुगेको छ ।
त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के रहेको छ भने राजनीतिक अस्थिरता बढेको र नेपालको सेयर बजार अस्थिरतामा फस्टाउने भएकोले अस्थिरता सुनिश्चित हुन थालेपछि बजार विस्तारै बढ्न थालेको छ । कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाले निरन्तरता नपाउने आँकलनले थप बल पुगेको देखिएको छ । अस्थिरतामा कसैले यसलाई नीतिगत नियन्त्रण गरी अलोकप्रिय निर्णय गर्ने संभावना नभएकोप्रति लगानीकर्ताहरु लगभग ढुक्क देखिन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अल्पकालीन लगानीमा निरुत्साहित गरिएपनि दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । उनीहरुले केही क्षेत्रमा गरेको लगानी अफलोड गर्नुपर्दा बिक्रीबाट आम्दानी बढ्ने देखिएको छ । यो पनि अर्को आकर्षक पक्षको रुपमा रहेको छ ।
विगत केही समययता नागरिक स्टक डीलर, म्युचअल फण्ड लगायत संस्थागत लगानीकर्ताहरु बढ्दै गएका छन् । यसले बजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत पुर